Siyaasadda Gaar ahaanshaha ee Zanzu.no | Zanzu
Boggu waxa uu ka kooban yahay macluumaadka ku saasabn habbaynta xogta gaarka ah, ay ku jirto isticmaalka kuukiyada ee zanzu.no. Waaxda caafimaadka waa mida maamulaysa waxa ku saabsan xogta gaarka ah taas oo la habbeeyay si la xidhidha booqoashooyinka websaydka zanzu.no.
Booqo zanzu.no website
Wakhti kasta qof ayaa booqda websaydkayaga, nidaamkauaga si toos ah ayuu u ururshaa xogta iyo macluumaadka kombuyuutarka isticmaalaha. Xogta soo socotaa waa la ururshaa, laakiin keliya qaab magaca la qariyay ka dib dhammaadka wakhtiga ku jirada:
qaybta cinwaanka IP ee nidaamka wicitaanka isticmaalaha, magaca la qariyay qaab la soo gaabiyay
wakhtiga iyo muddada booqashada
boggaga iyo faylasha la furay muddada booqashada
websaydka isticmaalayaahu uu booqanayay ka hore inta aanay soo booqan websaydkayaga (bogga tixraaca)
erayada baadhida ay isticmaaleen isticmaalayaashu si ay u soo galaan websaydka, iyo erayada baadhida la isticmaalay muddada baadhitaanada gudaha
booqashooyinka websaydyada dibada laga soo geli karol inkiyada websaydkayaga
Nidaamka macluumaadka isticmaalayaasha (nidaamka shaqaynaya, barowsarka, luqadda barowsarka, nooca qalabka, xalka shaashada)
Qaabka sharka ee kaydinta ku meelgaadhka ah ee xogta iyo faylashada diiwaanka marka aad booqanayso bogga internatka waa Qodobka 6 qaybta 1(f) ee Sharciga Ilaalinta Xogta Guud ee Midowga Yurub.
Waaxda Caafimaadka waxay u shaqaalaysiisaa adeegyada serfarka ee Zanzu.no ee Hetzner Online GmbH, kaas oo saldhigodu yahay Jarmalka. Dhammaan soo gelida websaydka sidaas awgeed waxa uu ku faafaa serfarooda Jarmalka.
Waaxda Caafimaadka Norway waxay isticmaashaa agabka Google Analytics si ay ula socoto tirada booqdayaasha ee websaydka, sida websaydka loo isticmaalo iyo asalka (wadanka/meesha) ee soo gelida websaydka. Cinwaanka IP magaca waa la qariyaa isla markaaba, suuragal maaha in la aqoonsado booqdayaasha.
Habbaynta xogta hore loo sheegay ay noo oggolaato inaan baadhno sida isticmaalasyaashu u isticmaalaan websaydkayaga. Qaadaa dhiga xogta laga soo ururshay waxay awood noo siisaa inaanu ururino macluumaadka ku saabsan shayga gaarka uu uga kooban yahay websaydku. Ujeedada xog ururinta waa in awood naloo siiyo inaanu qiimayno hadaf ka gaadhida websaydka oo si joogta ah loo horumariyo waxay ka kooban tahay isticmaalka saaxiibtinimada leh ee websaydka.
Waxaanu u isticmaalnaa kuukiyada si aanu uga dhigno websaydkayaga mid aadu saaxiibtinmo leh. Sheeyada qaarkooda waxay u baahan yihiin barowsarka isticmaalaha sidoo kale in la xaqiijiyo ka dib beddelka bogga.
Kuukiyadu waa faylashada qoraalada lagu kaydiyo barowsarka ama gudaha barowsarka nidaamka isticmaalka kombuyuutarka. Marka qof booqda ah uu booqdo websaydka, kuukiga waxaa lagu kaydin karaan nidaamka isticmaalaja ee shaqaynaya. Kuukigan waxa uu ka kooban yahay sifooyinka liidka awood u siiya barowsarku inuu aqoonsado marka websaydka la furo mar labbaad.
Haddii kuukiga la daaro barowsarkaaga (tusaale, Internet Explorer/Edge, Mozilla, Firefox, Google Chrome, Opera), ilaa sideed kuukiyo ah ayaa lagu kaydin doonaa websaydkayaga:
Nooca: Raad raacida
Muddada: 10 daqiiqo
Shaqada: Loo isticmaalo in lagu joojiyo tirada codsiyada, lagu xadido ururinta xogta aagaga soo gelidu ku badan tahay.
Muddada: 2 sano
Shaqada: Loo isticmaalo in lagu soo saaro tirakoobka booqda dhexda aqoonsiga macmiilka
Muddada: 1 maalin
Shaqada: Loo isticmaalo in lagu diiwaaniyo sida websaydka loo isticmaalo
Muddada: Dhammaadka xiliga
Shaqada: Loo isticmaalo in la soo geliyo Readspeaker
Muddada: 1 todobaad
Shaqada: Loo isticmaalo si loo kaydiyo xulashada luqadda
Muddada: 1 sano
Shaqada:Loo isticmaalo si loo kaydiyo xulashada luqaddau dhexeeya wakhtiyada gelida.
Shaqada: Loo isticmaalo si loogu kaydiyo macluumaadka haddii isticmaalahu uu oggolaaday inuu isticmaalo kuukiyada
Aasaaska sharciga ah ee habbaynta xogta gaarka ah ee isticmaalaysa kuukiyada Qodobka 6 qaybta 1(f) ee Sharciga Ilaalinta Xogta Guud ee Midowga Yurub. Xaalada kuukiyada ee loo isticmaalo ujeedooyinka raad raaca, aasaaska sharcigu waa Qodobka 6 qaybta 1(a) (macluumaadka ku salaysan).
Ujeedada isticmaalka farsamada kuukiyada lama huraanka ah waa in la fufudeeyo isticmaalka websaydka. Sifooyinka qaarkood websaydkayaga lama bixin karo iyaddoo la isticmaalin kuukiyada. Kuwan, barowsarka waa in la aqoonsadaa xataa ka dib isbeddelka bogga.
Websaydku waxa uu isticmaalaa raad raacida iyo kuukiyada analatiga si loo horumariyo tayada websaydka iyo waxay ka kooban tahay. Dhexda analatiga kuukiyada, waxaanu baran karnaa sida websaydka loo isticmaalo, markaas waxaanu si joogto ah u horumarinaa waxa aanu bixino. Isticmaalahu waa inuu oggolaadaa isticmaalka raad raacida iyo kuukiyada analatiga wakhtiga koowaad ee ay booqdaan websaydka.
Kuukiyada waxaa lagu kadiyaa kombuyuutarka isticmaalaha, kuwaas oo markiiba xogta ka gudbiya kombuyuutarka ilaa websaydka. Tani waxay xaqiijisaa in adiga, isticmaale ahaan aad si buuxda u maamusho isticmaalka kuukiyada. Beddelka setinka barowsarka, waxaad xidhi kartaa ama xayiri kartaa wareejinta kuukiyada. Kuukiyada hadda ka hor la kaydiyay waa la tirtiri karaa wakhti kasta. Tan waxaa loo samayn karaa si toos ah.
Gacanta ayaad ka tirtiri kartaa dhammaan kuukiyada ama waxaad ka habbayn kartaa barowsarka si aad si toos u tirtirto dhammaan kuukiyada dhammaan kullanka. Haddii kuukiyada la xidho, ma awoodi kartid inaad isticmaasho dhammaan sifooyinka websaydka.
Isku darka adeegyada kooxda saddexaad iyo macluumaadka
Waxaanu isticmaalnaa macluumaadka ama adeega adeeg bixiyayaasha kooxda saddexaad ee websaydka.
Tani had iyo jeer waxaa la moodaa in adeeg bixiyaasha kooxda saddexaad ay garanayso cinwaanka IP isticmaalayaasha, sababtoo ah waxay u baahan yihiin iyada inay dirto macluumaadka la rabo. Cinwaanka IP sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay siloo soo bandhigo macluumaadka. Waxaan rabnaa inaan hubsano inaanu keliya isticmaalno macluumaadkan haddii adeeg bixiyaha uu u baahado cinwaanka IP si loo siiyo macluumaadka. Kooxda saddexaad sidoo kale waxay isticmaalaan waxa loo yaqaano‘pixel tags’ (garaaf qarsoon, sidoo kale loo yaqaano sida ‘web beacons’) oo loogu talo galay ujeedooyinka tira koobka. “Taaga bigsalada” waxaa loo isticmaali karaa s iloo qiimeeyo macluumaadka, sida tirada booqdayaasha boggaga kala duwan ee websaydka. Macluuaadka qarsoon sidoo kale waxaa lagu kaydin karaa kuukiyada qalabka istcmaalaha. Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad badan oo ku saabsan ujeedada iyo qaybta xog ururinta adeeg bixiyayaasha kooxda saddexaad, siiba habbaynta dheeraadka ah ee iyada, fadlan u akhri si xishmad leh xeerarka gaar ahaanshaha adeeg bixiyayaasha.
Waxaanu isticmaalnaa adeegyada kooxda saddexaad iyo macluumaadka soo socda:
Waxaanu ku darnaa shaqada qoraal ilaa hadal ReadSpeaker ee ka timid, ReadSpeaker, Dolderseweg 2A, 3712 BP Huis ter Heide, Netherlands
Xeerka Gaar ahaanshaha https://www.readspeaker.com/nb/personvernpolitikk/
Ma rabtaa inaad wax badan ogaato?
Si aad wax badan uga ogaato sida Waaxda Caafimaadku u habbayso xogta gaarka ah ee la xidhiidha habbaynta xogta gaarka ah, arag Xeerka Gaar ahaanshaha Waaxda Caafimaadka bogga helsedirektoratet.no.
Su’aalaha ku saabsan Waaxda Caafimaadka habbaynteeda macluumaadk agaarka ah iyo isticmaalka kuukiyada waa in lagala hadlaa Sarkaalka Ilaalinta xogta personvernombud@helsedirektoratet.no.
Sida looga hadlo caafimaadka galmada ee bukaanka iyo galmada? Sidee ayuu gacan uga gaysan karaa Zanzu latalinta iyo wax barashada?
Macluumaad dheeraad ah oo xirfadlayaasha ah
Ma waxaad doon doonaysaa caawimo? Ka hel qof khibrad u leh cafimaad.
Fikirka Zanzu waxaa curiyay maamulka caafimaadka German (BZgA) iyo Sensoa. Hagaha Norwegian-ka ee Caafimaadku waxa uu qaatay Zanzu in lagu isticmaalo Norway.
Macluumaad dheeraad ah oo anaka nagu saabsan